Isamsung ye-Samsung S ifihla amandla emifanekiso ebalaseleyo | I-Androidsis
Ngokwesiqhelo xa sithetha ngeempawu zobuchwephesha ezinayo ifowuni, ezona zinto zibalulekileyo zihlala zixelwa, njengeprosesa, isantya sayo, inani lememori, amandla ekhamera, ... Phakathi kwezi mpawu, into edla ngokuvakala uninzi okanye uthathele ingqalelo xa uthelekisa sisantya seprosesa kwaye ngesiqhelo sicinga ukuba iprosesa ekhawulezayo ibhetele kunaleyo inesantya esincinci. Le ngxelo ayisoloko injalo kwaye ichaphazela nezinye izinto ezijikeleze iprosesa enje ngeyunithi eqhuba imifanekiso, eya kuba yinto efanayo nekhadi lemizobo kwiikhompyuter zedesktop.
Ukongeza, iiprosesa zinokuvela kwisiseko esinye, umzekelo I-ARM Cortex-A8, kodwa babe nokusebenza okwahluke ngokupheleleyo xa kuphuhliswa ziinkampani ezahlukeneyo.
Ngokusungulwa kwenkqubo entsha Samsung Galaxy S Inye kuphela into etyeshelwe ukuba xa isaziwa, inika ukubaluleka kwesi sigxina kunokuba sasinikwe ngaphambili.
Iprosesa yiyo elawula lonke ubalo oluyimfuneko ukuqhuba itheminali, ikhompyuter, umatshini okanye nantoni na, yintliziyo nengqondo. Kule processor abancedisi bongezwa ukulawula inxenye yalo msebenzi nokuba iprosesa isebenza kuphela ngokubalulekileyo. Omnye waba bancedisi baphantse ngoyena ulawula imizobo. Ukulungiswa kwemizobo namhlanje ngumsebenzi onzima kwaye ukuba oku kwenziwa ngenye indawo yesixhobo ngaphandle kweprosesa, ishiywe ukuba isebenze ngokukhululekileyo kweminye imisebenzi yolawulo.
Xa ifayile ye- Samsung Galaxy S Kwakucacile ukuba kunikwe inkcukacha ebaluleke kakhulu kwaye iprosesa ye-Samsung ikhatshwa ngumncedisi wemisebenzi yokuzoba yemifanekiso eyenza isidenge kwezinye iifowuni ezifanayo, ezinje nge Nexus One okanye Isiseko seMotorola.
Emva koko ndikushiya ubudlelwane negama lesiphelo, uhlobo lweprosesa ephambili, iprosesa yemizobo kunye nenani loonxantathu ngomzuzwana ukuba liyakwazi ukubhalisa okanye ukuqhubekeka.
I-Motorola Droid /zigaba: I-TI OMAP3430 enePowerVR SGX530 = 7 yezigidi (?) Oonxantathu / okwesibini
I-Nexus One: I-Qualcomm QSD8 × 50 ene-Adreno 200 = 22 oonxantathu / isibini
I-iPhone 3G S: ICortex-A8 (600 MHz) enePowerVR SGX535 = 28 oonxantathu / isibini
Samsung Galaxy S: I-S5PC110 enePowerVR SGX540 = 90 oonxantathu / isibini
Njengoko ubona, amandla oku ayamangalisa Samsung Galaxy S eshiya amanabukeni I-Motorola Milestone, i-Nexus One kunye ne-iPhone uqobo.
Kulabo bafuna ukuthelekiswa nesixhobo esisebenzisa kakhulu olu hlobo lweeprosesa ezinje ngeengcebiso, phawula ukuba i-PS3 iyakwazi ukudlala oonxantathu abazizigidi ezingama-275 ngomzuzwana kunye ne-Xbox 360 500 yezigidi zonxantathu ngomzuzwana. Nangona i-Samsung ikhawuleza, isekude kumandla ala ma-consoles.
Ngoku uthanda ngakumbi i Samsung Galaxy S?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy S ifihla amandla emizobo emangalisayo
Ewe inika imbeko, kodwa ayisiyiyo kuphela inombolo "ekrwada" kodwa nophawu: ukuba umntu uthathela ingqalelo into yokuba ukusebenza kwePowerVR SGX530 (nangona kubonakala ngathi akunjalo) okonyusa isiganeko esibalulekileyo lilinye. inyusa i-N1, khawufane ucinge ukuba le nto inokwenziwa yintoni, bufffff
"Nangona i-Samsung ikhawuleza, isekude kumandla ezi zinto ziduduzayo."
uthathela ingqalelo ukuba i-ps3 oyibekileyo ngokomzekelo ishukumisela oonxantathu abangama-275m ngomzuzwana .. ngesisombululo sika-1920 × 1080
kwaye le ntwana ihambisa i-90m kwisisombululo max WVGA 800 × 480
Nge-wga, andicingi ukuba umahluko unokubonwa kakhulu ukuba umbane usetyenziswe kakuhle.Akufani ukubona i-275 yezigidi zeepoligoni ezihamba kwiscreen se-40 ″ kunakwisikrini se-4..
ngokunyaniseka sele inele ngokwaneleyo ... enye into kukuba bayisebenzisa kakuhle
Ewe kuyachukumisa, kodwa abanandlela yimbi yokuphakamisa igama abasebenzisi be-Android abalishiyileyo ngokushiya i-Galaxy yokuqala, mna phakathi kwabo ... kuya kufuneka bafunde kwezinye iimveliso ngale ndlela ... ukuthenga kum kunye ne-Samsung kwaye okwangoku ndiseshumi elinesithathu, ngakumbi ukubona ukuba olu khuphiswano alusisiqhwala kude nalo.
Ngaba isiganeko esibalulekileyo sineCortex A8?
i-OMAP 3430 exhasa iseti yomyalelo we-ARMv7 kunye ne-ARM Cortex A-8 CPU
UDario Loyo sitsho
Ndicinga ukuba liqela elikhulu, kodwa ndingathanda ukwazi eVenezuela, ngakumbi kwizixeko zaseCoro nasePunto Fijo, ezizithengisayo, ndichukumisekile yile nto ithethwayo malunga nolwazi olungcono kune-iphone.
Phendula uDario Loyo